~ ဏီလင်းညို ~: ထင်
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 1:09 AM
နဲနဲလေးနေကောင်းတာနဲ့ ဘလော့လိုက်ဖတ်နေပြီလား ကိုဏီလင်းညို...။ ပေးထားတဲ့နာမည်လေးတွေ တော်တော်စဉ်းစားထားရမှာပဲနော်။ ကောင်းပါတယ်ဖတ်ရတာ လူတွေရဲ့စိတ်က အဲလိုမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ကြာတာပဲလေ။အားပေးလျှက်ပါ။ ကျန်းမာရေးကိုအသေးစိတ်ဂရုစိုက်ပါနော်။
ဒါကတော့ အစ်ကိုရယ်... ဒီလိုပေါ့။ လူပဲ။ ရေးထားတဲ့ စိတ်ကူးကောင်းပါတယ်။ ဆောင်းပါးသက်သက်ဆို သိပ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး..။
အွန်လိ်ုင်းမပေါ် ဘလော့လည်တုန်း တွေ့လို့ကတော့လား ဝင်တိုက်ပစ်မှာ
ဝါသနာအရ ရယ်ရင်ဖွင့်ခွင့်လေးရယ်ကြောင့် ဘလော့ရေးတာပါဗျာ
း) အဲဂလိုတော့ အနော်ပါဖူးဂျား)
ကိုဏီ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် နာမည်တွေတော်တော်တွေးလိုက်ရမယ်း)
အဟားဟား တွေးတတ်ရေးတတ်ပါဧ။် ...
သြော် ရန်ကုန်မြို့ကြီး ပြောင်းလဲသွားတာလား ..
လူတွေပဲ ပြောင်းလဲသွားကြတာလား ...
တွေးစမ်း တွေးစမ်း ...
ဒါက အနုပညာရှင် ဟုတ်ဘူးဗျ ...
အမလေး ကား .. ကား ...
ကိုဏီးရေ ကယ်ပါအုန်းဗျ ... :P :P :P
အီး... ထဲကဖတ်နေရင်း ဆုံးသွားတော့ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်လို့ ကောမန့်လာပေးတာ။ ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စကားထက် ကောင်းတာရှိရင် အဲစကားပြောသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။ အပေါ်မှာ အဆိုတော်နဲ့ မင်းသမီးပြီးတော့ တစ်ခုခုတော့ ကျန်ဦးမယ်ထင်နေတာ... ဒီဘက်လှည့်လာမယ်လို့ မတွေးမိဘူး။ ကွန်ပျူတာဆိုတာ မြင်လိုက်တော့ အသံထွက်အောင် ထရယ်မိတာ ရုံးမှာ ဘေးက တရုတ်ကတောင် လှည့်ကြည့်တယ်။ တအားတော်တယ် ကိုဏီလင်းညို.. မိုက်တယ်. မိုက်တယ်။ ဒီအတွေးကိုပေးပြီး တခြားလူကို ရေးခိုင်းရင် ဒီလောက်ဖတ်လို့ကောင်းမယ် မထင်ဘူး။
lwin lwin said...
ဝင်တိုက်ပြန်ပြီ ဘာထင်လို့လည်းဗျာ ဒီက နံမည်ကြီးဘလောဂ်ဂါ ပါ သြ နံမည်ကြီးဘလော့ဂါ ဘယ်လောက်ကြီးသလည်း ဆိုရင် တင်းပလိတ်တခုလုံး ကျနော့် နံမည်နဲ့ပြည့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟိုဖြတ် ဒီပိတ် တွေ ကြောင့်လွန်းလို့။
လူဆိုတာ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ရူးနေကြတာပဲ တဲ့.. :D :D
ဟိုငေးဒီငေး မလျှောက်နဲ့လေဗျာ။ကျွန်တော် တစ်ယောက်လုံးကို မမြင်ဖူးလား
ကျွန်တော့်ကို မသိဘူးလား ။ ကျွန်တော်လဲ အဆိုတော်ပဲ။ အိမ်ထဲမှာပဲဆိုတာ ဖုန်းနဲ့ ရီကော့လုပ်ပြီး ဆိုတာ။
အန်တီညို ရေးထားတာတွေများ လန်ထွက်နေတယ်။ နံမည်တွေမြင်ပြီး လွမ်းထားထားလဲ ငိုနေပါဦးမယ်။
နာမ်မည်တွေ တော်တော် စဉ်းစားယူရမယ်ထင်ပါ့။
သူများကို ခလုပ်တိုက်မိမှာလဲ စိုးတယ်..။
ကိုယ်က သူများအတွက် ခလုပ်ဖြစ်မှာလည်း စိုးမိတယ်...။
( ဒီလို အသောအထေ့ရေးနိုင်နေတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်းခန်းသာလို့ မာနေပြီဟု ယူဆပါကြောင်း အလကာင်္ကျော်စွာ အတုမရှိသိရီသုဓမ္မထိပ်ပြောင်မိုက်ကယ်ဏီလင်းညိုမူးရေ..)
မော်ဒယ်တွေ မည့်ထားတဲ့ နံမည်တွေတော့ သဘောကျတယ်အေ...
သုံးယောက်လုံးကို နံမည်အပြည့်အစုံများ ခေါ်လိုက်ရရင် လျှာအလျားလိုက် ထွက်နိုင်တယ်..
အင်း ကလေးတွေ နံမည်ပေးဖို့ အခက်အခဲရှိနေရင် အွန်လိုင်းနံမည်ကြီး စာရေးဆရာ ကိုဏီလင်းညိုဆီ သွားကြလို့ အကြံပေးလိုက်ဦးမှ။
တို့လဲ အနုပညာရှင်မင်းသမီးလို့ပြောလို့ရတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ မော်ဒယ်သင်တန်းရှေ့ကနေ ဖြတ်လျှောက်ဖူးတယ် သိလား။ အော်တိုထိုးခိုင်းမယ်ဆို မအားသေးဘူးနော်... ကြိုတော့ စာရင်းပေးထား။း)
အိပ်မက်ထဲမှာပါ မူးပြီး တွေ့တဲ့သူနဲ့ ဝင်တိုက်နေတော့တာပါပဲ...
ဟုတ်တယ် ကိုဏီ ရေ ..
ကျွန်တော် တို့ က “ ထင် ” တစ်လုံး နဲ့နေ နေ ကြ တာပါလို့ ။
ကိုယ့် ကိုယ် ကို “ ထင် ” လိုက် တာလေ..
ဒါပေမဲ့အဲ့ ဒီ ထင် ကလေး ကြောင့် ပဲ မျှော်လင့် ချက်ကလေး
တွေ ထား တတ် ၊ စိတ်ကူး တတ် လာပြီး ဆက်လက် ရှင်သန် နေသွား
နိူင် တာ မဟုတ် လား...
အစ်ကို ဏီလင်းညို.....ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း လဲခဏခဏပြုံးမိ။
အရမ်းကို ကောင်းပါတယ် အစ်ကို။ ရယ်လည်းရယ်မိတယ်။
ကြိုက်တယ်။ :) ။ ...ခင်မင်လျှက်..ခင်မာလာအောင်..:)
ဏီဏီရေ... မရောက်တာကြာလို့လာပြန်ပီဟေ့... ပို့က အရမ်းမိုက်လို့ ကော်မန့်မပေးပဲမနေနိုင်တော့ဘူး.... အဲလိုနာမည်တွေကို ဘိုင်အိုသင်တုန်းကနဲ့ ဟိုစာရေးဆရာမ ဝတ်ထုတွေ ဖတ်တုန်းကလို ကျော်ဖတ်တဲ့ အကျင့် အော်တိုငုတ်တုတ် ရထားလို့ ကျော်ပြီးမှ သေချာ တလုံးခြင်းရွတ်ကြည့်ရတယ်...တော်ကြာ... လမ်းမှာဝင်တိုက်နေမှ မသိလိုက်ရင် ဟောက်ခံထိနေအူးမယ်...း))
ဏီလင်းညိုနဲ့တော့ ၀င်မတိုက်ရဲပါဘူး. ဘလော့ထဲ ထည့်ရေးမှာစိုးလို့း)))
ဏီရေ .. လာလည်သွားတယ်နော်..
အဆိုတော်ဖြစ်ကြောင်း ၊မောဒယ်ဖြစ်ကြောင်း ၊စာရေးဆရာဖြစ်ကြောင်း ဆာတီဖစ်ကိတ်တွေအလကားထုတ်ပေးမှာမို့ လာယူကြပါ
အဲဒီတော့ "ချစ်သူမောင်ထံမှာလာယူပါ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးဦးမဗျို့
မီးလဲ စာရေးဆရာပဲ ..တပြားသားမှမလျှော့ဘူးးးနာကွ... :))))
ကျနော်က အကို့ ပိတ်သတ်ပါခင်မျး)
ဒီလို သွေးကျဆေးလေးတွေ မကြာမကြာရေးကွ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘဝမြင့်တဲ့ အရူးတွေက ပိုကုရခက်တယ်။
ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပဲ မှန်တယ် ထင်တတ်ကြတာ။
တကယ်တော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေထက် ပိုတော် ပိုတတ်တဲ့
စာဖတ်သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး ပါ။ မှားတဲ့အချက် ဝင်ပြောရင်တောင် ငါ့ဘလော့ပဲ ငါပဲမှန်တယ် လုပ်တာနဲ့ ဘလော့လောက က အထင်သေးစရာ ဖြစ်ရတယ်။ တခြား အေးဆေး ရေးသူတွေလည်း ထိခိုက်ရတယ်။
(ခုမှရောက်ဖြစ်တာတော့ ခွင့်လွှတ်။ ဖတ်ပြီးတာက ကြာပြီ။ သက်သက် မရေးသေးတာ။)
"ထင်" တလုံး ဟာ ကြောက်စရာကောင်းတယ် ...